एजेन्सी अध्ययनका अनुसार हाँसो ठट्टा गर्ने युवासँग युवती बढी आकर्षित हुने गरेका छन् । अध्ययन अनुसार जुन युवक हाँसो ठट्टा र रमाइलो गरिरहन्छन् त्यस्ता युवक सँग युवतीहरु भुतुक्कै हुन्छन् । ठट्टा गर्ने व्यक्ति रमाइलो स्वभावका हुनछन् । उनीहरुले कुनै न कुनै बहानामा अरुलाई हसाई रहेका हुन्छन् । उनीहरुको छेउमा बस्ने कसलाई पनि उनीहरुले बोर फिल […]
कम उमेरमा यौन सम्बन्ध स्थापित गरेर आफ्नो कुमारित्व गुमाएकोमा निकै अफसोस हुने ब्रिटेनमा यौन व्यवहारमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले खुलासा गरेको छ । किशोरावस्थामा भएका एक तिहाई बढी महिला र एक चौथाईभन्दा बढी पुरुषले पहिलो पटक यौनसम्बन्ध राख्दा, आफ्नो उमेर सही नभएको स्विकार गरेका छन् । युवा–युवतीको प्रतिक्रियाबाट पत्ता लागेअनुसार ४० प्रतिशत युवती र २६ प्रतिशत […]
महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई खुशी पार्ने सात तरिका अरुको प्रशंसा नगर्नुस् शारीरिक सम्बन्धलाई आड नवनाउनुस् घुमाउरो पाराले कुरा नगर्नुस् व्यक्तिगत चिजहरुमा हस्ताक्षेप नगर्नुस् कम बोल्नुस् शंका हटाउनुस् सपिङलाई महत्व नदिनुस्
एजेन्सी, आफ्नो केटिसँग पहिलोपटक डेटमा जाँदै हुनुहुन्छ भने उनीसँगको सम्बन्ध सुमधुर र दिगो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसका केही उपायहरु छन् । पहिला आफू ढोका खोल्नुस् फूल मोबाइल साइलेन्ट न भीडभाड न सुनसान मदिरातिर ध्यान नदिनु
हिलेको समयमा रिलेनसनशिपमा नहुने मानिस त प्राय कमै होला । किन की पछिल्लो समयमा फेसबुकले गर्दा पनि रिलेनसनशिपमा बस्ने गर्छन् । फेसबुकवाट फोटो हेर्न पाइन्छ । त्यसैले पनि एक अर्कालाई मनपराउने गर्छ र रिलेनसनशिपमा बस्छन् । तर सम्बन्धमा बसेपछि कसरी सुमधुर बनाउने भन्ने थाहा नहुन सक्छ । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनले जुन सम्बन्धमा जोडीले […]
एजेन्सी, दिउँसो मेकअप गरेर बस्नुभएको छ भने राति सुत्नुअघि कुनै पनि हालतमा मेकअप पखाल्नुपर्छ । कुनै गुणस्तरीय लोसन, मेकअप रिमुभर तथा तेलले मेकअप सफा गर्नु उत्तम हुन्छ । दिनभरको धुवाँ, फोहोर, धुलोमैलो सफा गरेर मात्र सुत्नुपर्छ । त्यसका लागि हरेक दिन फेसवासले मुख धुन बिर्सनुहुँदैन । अनुहारको सफाइका लागि स्क्रबको पनि त्यतिकै महŒव हुन्छ । तर, हरेक दिन स्क्रब नगर्नु […]
आफ्नो श्रीमानलाई खुशी पार्नको लागि यी तरिका अपनाउनुस
एजेन्सी, विवाहपछि हरेक श्रीमान श्रीमातीको झगडा नहुने कमै होलान तर यस झगडालाई कम गर्नको लागि पनि श्रीमतिहरुले अपनाउनुपर्ने हुन्छ आफ्नो श्रीमानलाई खुसी बनाउनको लागि श्रीमतीहरु अपनाउनुपर्ने यी तरिकाहरु यदि तपाँई महिला हुनुहुन्छ र आफ्नो श्रीमानलाई खुशी पार्न चाहानुहुन्छ भने यी सात तरिका आजैबाट शुरु गर्नुस् । धेरैजसो श्रीमानहरु आफ्नो श्रीमातीको मुखबाट अन्य पुरुषको प्रशंसा सुन्न […]
नामको पहिलो अक्षरका आधारमा युवतीहरुको स्वभाव कस्तो होला ? जानी राखौँ । ‘ए’ नामका युवती पहिलो अक्षर ‘ए’ हुने युवतीहरुको स्वाभाव इमोशनल हुन्छ । यिनीहरु कुनै युवकको अनुहार हेरेर नै प्रेममा पर्छन् । यस्ता युवतीहरु छिट्टै पार्टनरलाई विश्वास गर्छन् । ‘एक्स्ट्रा केयरिङ’ प्रकृतिका यस अक्षरवाली युवती जीवनभरी पार्टनरको साथ छोड्दैनन् । ‘बी’ नामका युवती यस […]
काखीमुनिको गन्ध हटाउने घरेलु उपाय
गर्मी मौसममा पसिनाका कारणले शरीर गनाउने समस्या सबैलाई हुन्छ । यसका लागि मानिसहरुले विभिन्न उपायहरु अपनाउने गरेका छन् । बजारमा पाइने विभिन्न बास्नादार सेन्टहरु प्रयोग गरेतापनि मानिसहरुले यो समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् । यसैकारण यस्ता दुर्गन्धलाई सधैँका लागि हटाउन विभिन्न घरेलु उपायहरु अपनाउन सकिन्छ । फिट्किरी शरीरको गन्ध हटाउनमा फिट्किरी सबैभन्दा उपयोगी मानिने गर्छ । […]
कपाल मानिसकाे साैन्दर्यताकाे मुख्य वस्तु हाे । तर पछिल्लाे समय कपाल झर्ने समस्याले मानिसहरुलाई हैरान परेकाे छ तर अब चिन्ता लिनु पर्दैन । पछिल्लाे समयकाे अनुसन्धनमा १० वटा सजिला तरिकाहरुको पुष्टि गरेका छन जसलाई पालना गर्दा कपालका सबै खाले समस्याबाट छुट्कारा प्राप्त गर्न सकिन्छ :- १) अमला टुक्रा गर्ने र नरिवलको तेलमा मिसाउने । त्यसपछि, […]
यस्तो छ, पेन्टी लगाउँदाका फाइदा !
एजेन्सी, कपडा हरेक मानिसले आफ्नो सुन्दरताको लागि लगाउने गर्छन् लुगा फेरी सुन्दरताको लागि मात्र होइन । लुगा सबैले मानिसले देख्ने हुँदैन किन भने लुगा पेन्टी र बुटिक पनि हो । त्यसैले गर्दा यो पेन्टी केही महिला सारीरिक सम्बन्धको अपिल बढाउन कमाण्डो स्टाइलमा हिड्छ । ता कि आफूले देखेर अरु आकषिर्त होउन् भन्ने उनीहरु चाहन्छन् । […]
हामी भित्र सकरात्मक र नकारात्मक गरी दुई प्रकारका भावनाहरु छन् । सकारात्मक भावनामा भावनामा प्रेम, आदर, अनुग्रह, आनन्द पर्छन् । नकरात्मकमा घृणा, रिस, इर्श्या, इख, गुनासो आदि पर्छन्। सकरात्मक भावनले हामीमा ऊर्जा बढाउँछ । खुसीको सञ्चार गराउँछ भने नकरात्मकले दुःखी बनाउँछ । त्यसैले हामी अभावका कारण दुःखी होइन, हामीमा रहेका नकरात्मक भावनालाई बढवा दिएर दुःखी […]
थकानवाट राहत पाउन यसरी प्रयोग गर्नुहोस् फिटकिरी
धेरै वर्षदेखि तपाईको घरमा फिटकिरीको प्रयोग भएको हुनुपर्छ । फिडकीरीमा एन्टी व्यक्टेरीयको गुण पाइन्छ । फिडकीरी दुई थरिको हुन्छ, एउटा रातो र अर्को सेतो तर घरमा धेरै सेतो फिटकरीको प्रयोग गरिन्छ । कुनै घरमा यसलाई पानी सफा गर्नको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदमा पनि यसको धेरै फाइदाको उल्लेख गरिएको छ । फिडकरीको प्रयोग २३ […]
मेवाको बिउ सेवनका यस्ता छन् फाइदा
मेवा एक स्वादिष्ट तथा पोषणले भरिपूर्ण फल हो भन्ने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुनसक्तैन । तर मेवा भित्र हुने यसका बिउहरु अझै लाभदायक तथा स्वास्थ्यबद्र्धक हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी हामीहरुमध्ये थोरैलाई मात्र हुनसक्छ । आज डिसीनेपाल तपाईंहरुलाई मेवाको बिउ सेवन गर्नाले हुनसक्ने फाईदाहरुका बारेमा जानकारी गराउँदै छ । मेवाको बिउ सेवन गर्नाले हुने फाइदाहरु: […]
डिप्रेसनबाट मुक्त हुन सहयोग गर्दछ पुदीनाको नियमित सेवन
पुदीनाले खाना पचाउन सहयोग पुर्याउँछ । तौल घटाउने, डिप्रेसन तथा थकान घटाउने र टाउको दुखाई हटाउने लगायतका काम गर्छ । स्मरणशक्ति कमजोर भएमा यसको सेवन गर्दा त्यस्तो समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ । यदि श्वासको दुर्गन्ध छ भने पनि यसको सेवनले हटाउन मद्दत गर्दछ । पुदीनालाई प्रयोग गरेर टुथपेष्ट, चुईङगम, क्यान्डी, इन्हेलरजस्ता औषधिमा प्रयोग गरिन्छ । […]
जीरा हामीले भान्सामा तरकारीमा मसलाको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्दै आएका छौ । हामीलाई थाहा छैनकि जीरा कुन कुन रोगको औषधीको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर । हामीले यहाँ जीराको औषधीय गुण को विषयमा चर्चा गरेका छौ । पिसाब रोग र पत्थरी भएमा जीराको धूलो र काल्चि मिस्रीको धूलो बराबर मिसाएर बिहान्बेलुका १/१ चम्चा पानीसँग खाने […]
फलफूल खाने यस्ताे तालिका बनाउनुहाेस्
फलफूलले मानिसकाे शारीरिक वृद्धि र मानसिक विकासकाे लागि सहयाेग गर्ने गर्दछ । तर कुन फलफूल कतिवेला खाने भन्ने राम्राे जानकारी हुन सकेन भने फाइदाभन्दा वेफाइदा बढि हुन सक्दछ । त्यसैले कतिबेला कस्तो फलफुल खाने भन्ने विषयमा सामान्य टिप्स लिनुहाेस् :- बिहान खाने फलफूल मानिसले सामान्यतया बिहानमा परिश्रम वा काम गर्छन् । बढी काम गर्ने मानिसहरुले यो समयमा […]